Duqa Cusub ee Boosaaso oo Kormeer ku tagay Saldhigyada Degmada. – SBC
Duqa Cusub ee Boosaaso oo Kormeer ku tagay Saldhigyada Degmada.
Duqa Degmada Boosaaso Xasan Cabdale Xasan ayaa maanta galinkii hore wax uu booqosho ku tagay isteeshinada gudaha Magaalada Boosaaso. waxaana ku waheliyay booqashadaas ku xigeenkiisa iyo saxaafda ka hawl gasha gudaha Magaalada Boosaaso.
Duqa Degmada ayaa waxa uu booqday afarta isteeshin ee magaalada marka laga reebo xabsiga wayn ee Boosaaso.
Duqa Degmada Boosaaso saldhigyada uu tagay ayaa waxaa ka mid ahaa, saldhiga Baalade ee xaafada Baalade, saldhiga Mijir, saldhiga Biyo kulule iyo saldhiga Bartamaha.
Duqa degmada ayaa ka wareystay Taliye yaasha saldhigyada uu booday qaabka ay u socdaan shaqooyinkooda iyo weliba Xaaladaha Maxaamiista iyo amniga.
Waxayna taliyaasha saldhigyada si is ku mid ah u sheegeen in saldhigyada ku yaala magaalada Boosaaso ay u baahan yihiin dayactir dhanka dhismaha ah, iyagoo sheegay in maxabiista ku jurta ay hada aad u yar yihiin marka la eego siday markii hore u badnaan jireen iyagoo intaasi ku daray in lagu tilmaami karo Amnniga magaada Boosaaso uu yahay mid aad u wanaagsan xiligan.
Ugu danbaytii duqa magaalada Boosaaso ayaa war baahinta kula hadlay xarunta degmada isagoo sheegay in booqashadan ay qayb ka tahay is barashada maamulka cusub iyo taliyaasha saldhigyada magaalada Boosaaso.
Waxa uuna intaasi raaciyay in uu aad ugu faraxsan yahay war bixintii ay soo siiyeen taliyaasha saldhigyada uuna wax ka qaban doono waxa ay u baahan yihiin oo ay ugu horayso dayac tirka saldhigyada.
Waxayna duqa iyo taliyaasha ku balameen wada shaqayn aad u balaaran iyadoo taliyeyaashu sheegeen in ay hada aad ula shaqeeyaan bulshada ku nool magaalada Boosaaso uguna baqaayaan inay la sii shaqeeyan taasina ay horseedi karto in nabad lagu noolado.